VAVOLOMBELONA AVOKOA NY MPINO REHETRA
Afaka manatratra olona 1 lavitrisa amin’ny Filazantsara isika amin’ny 2020 raha miaraka!
HANETSIKA MPINO 100 TAPITRISA MBA HANATRARANA OLONA 1 LAVITRISA AMIN’NY FILAZANTSARA AMIN’NY 2020.
Ny Andro Maneran-tany ho an’ny Fitoriana ny Filazantsara dia vina avy amin’Andriamanitra. Zaraiko izany vina izany mba ho voatorin’ny Filazantsara...
Ny Filazantsara no hafatra lehibe indrindra nambara hatrizay ary nantsoina isika mba hizara izany, hanala ny Kristiana amin’ny fahanginany! Alaivo...
Ny Go 2020 (Volan’ny Fitoriana Filazantsara Maneran-tany) dia fahafahana ho an’ny mpino manerana izao tontolo izao mba ho eny ivelany ary hijoro...
NY FIVAVAHANA REHETRA MBOLA MAHAY NY ZAVATRA TOKONY HAFA
Mivavaha mba hisy fanatrehan’Andriamanitra anatin’izao fotoan-tsarotra noho ny corona izao, ary mba ho maro ny olona ho voavonjy amin’ny Mey 2020.
Fiangonana 1 tapitrisa sy mpino 100 tapitrisa no hizara ny Filazantsara mandritra ny volana May.
Dihy mirindra na “Flash Mob”
Zarao amin’ny tambajotra sosialy ireo marika EFATRA ary amin’ny toerana ahafahana manatanteraka ny dihy mirindra.
Miahia ireo olona mila fanampiana sy mandalo fotoan-tsarotra. Afaka mampiseho firaisan-kina ianao amin’ny fanohanana sy fanampiana.
Ireo mpino vaovao dia hatao mpianatra ary hampidirina ao amin’ny fiangonana vaovao izay misy.
Mandritra ny faran’ny herinandro farany amin’ny Oktobra 2020, dia mpino vaovao an-tapitrisany no hatao batisa.
…ary maro hafa koa
Ny GO 2020 dia manampy ny fiangonantsika hitombo ary hanorina fomba fiaina ara-pilazantsara.